သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကို ကွိုးကိုငျခွယျလှယျနကွေောငျး သိနိုငျမယျ့ အခကျြ (၁၀) ခကျြ
HomeLoveသငျ့ခဈြသူက သငျ့ကို ကွိုးကိုငျခွယျလှယျနကွေောငျး သိနိုငျမယျ့ အခကျြ (၁၀) ခကျြ
လူတှဟော ခဈြသူတှေ ဖွဈလာကွပွီ ဆိုရငျ ဂရုစိုကျတာတှေ၊ ဖေးမတာတှေ၊ နားလညျမှု ပေးတာတှကေို လိုခငျြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ သငျကို့ ရုပျသေးရုပျ တဈရုပျလို ကွိုးကိုငျ ခွယျလှယျနရေငျတော့ လမျးခှဲလိုကျတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
1. သငျဟာ အမွဲတမျး အပွဈ ရှိတယျ။
ကွိုးကိုငျတတျ သူတှရေဲ့ အရညျအခငျြးက သငျ့မှ အပွဈ မရှိရငျတောငျ အပွဈရှိသလို ခံစားရအောငျ ပွုလုပျတတျ တာပါပဲ။ သငျက အကူအညီ တောငျးစရာရှိလို့ ဖုနျးဆကျရငျတောငျ အလုပျမြားနတော မသိဘူးလား၊ ဘာလို့ ဒီအကွောငျးတှေ လာပွောနရေတာလဲ ဆိုပွီး ပွောပါလိမျ့မယျ။ အကူအညီတောငျးမိတဲ့သူက မှားတယျလို့ ခံစားသှား ရအောငျ ပွောတတျကွပါတယျ။ သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကို ကွိုးကိုငှနရေငျ ဘယျလိုတုံ့ပွနျရမလဲ ဆိုတာကို Barrie Davenpere က အကွံပေးထား ပါတယျ။
- သူက သငျ့ကို ထိနျးခြုပျဖို့ ကွိုးစားနတေယျ ဆိုတာ လကျခံပါ။
- စိတျကို တညျတညျငွိမျငွိမျ ထားပါ။
- သူတို့ရဲ့ အပွုအမူ အတှကျ တာဝနျယူရလိမျ့မယျလို့ စဉျးစားလိုကျပါ။
2. သူတို့ဟာ အမွဲနဈနာသူတှေ ဖွဈနတေတျကွတယျ။
ကွိုးကိုငျတတျသူတှကေ သူတို့ဘဝဟာ သနားစရာကောငျးကွောငျး၊ ကံဆိုးကွောငျး၊ အခကျအခဲတှနေဲ့ ပွညျ့နကွေောငျး သနားစရာကောငျးအောငျ ပွောတတျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သူတို့ဟာ ခေါငျးရှောငျ တတျသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ သူနဲ့ ပတျသကျပွီး အမွဲတမျး စိတျညဈစရာတှေ ကိုပဲ ကွားနရေ မှာပါ။ သူတို့ရဲ့ အကြိုးအတှကျ ပွောပွနတော ဖွဈလို့ ပွိုငျမငွငျးဘဲ အေးအေးဆေးဆေး နားထောငျပေးလိုကျပါ။
3. ရနျစ တတျတယျ။
ကွိုးကိုငျတတျ သူတှဟော အရငျ ရနျစတတျ ကွပါတယျ။ သငျ့ကို ဒေါသ ထှကျလာအောငျ၊ စိတျဆိုးလာအောငျ တဖွညျးဖွညျး ရနျစတတျပါတယျ။ ရနျဖွဈတဲ့အခါ သငျက လှနျကွောငျး အမြားမွငျအောငျလုပျပွီး သူ့အပွဈကိုတော့ ဖုံးကှယျပါတယျ။
ဆုံးဖွတျရဖို့ အခြိနျနညျးလာလလေေ၊ စဉျးစားဖို့ အခြိနျနညျးလာလလေေ ပါပဲ။ ကွိုးကိုငျတတျသူတှကေ သငျ့ကို စဉျးစားရကွပျအောငျ လုပျတတျ ပါတယျ။ သငျဟာ မစဉျးစားတတျ တော့ဘဲ အမှားတှပေဲ လုပျမိအောငျ တမငျခြောကျတှနျး ပေးနတောပါ။
5. သငျ့ပွဿနာတှကေို မကွားခငျြယောငျ ဆောငျနတေတျတယျ။
ကွိုးကိုငျတတျ သူတှရေဲ့အရညျအခငျြးက ဂရုမစိုကျတတျခွငျး ပါပဲ။ သငျ့ပွဿနာတှကေို ပွောတဲ့အခါ သူက စကားဖွတျပွောပွီး အလုပျမြားခငျြယောငျ ဆောငျနတေတျကွ ပါတယျ။ သူ့ပွဿနာတှကေ သငျ့ပွဿနာတှထေကျ ကွီးကွောငျး သနားစရာကောငျးအောငျ ပွောတတျပါသေးတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ဒီလို ခေါငျးရှောငျတတျသူကို လမျးခှဲပွီး ကိုယျ့အပျေါ တကယျ မတ်ေတာထားသူကိုပဲ ရှာသငျ့ပါတယျ။
6. သငျမရှိရငျ သူသသှေားလိမျ့မယျ ဆိုတဲ့စကားကို ခဏခဏ ပွောတတျတယျ။
အဲဒီလိုစကားက သငျ့စိတျကို လှညျ့စားလိုကျတာပါ။ "နငျမရှိတော့ ငါသလေိုကျမှာနျော" လို့လညျး ပွောလညျး မယုံလိုကျပါနဲ့။ သူတဈခုခု ဖွဈသှားရငျ သငျ့ပယောဂ မကငျးသယောငျ ဖွဈအောငျ လုပျတာပါ။ သူပွောတဲ့အတိုငျး တကယျ မသနေိုငျလို့ ရဲရဲသာ လမျးခှဲလိုကျပါ။
7. အပွဈကို လှဲခတြတျတယျ။
လိုရာကို ဆှဲပွီး မမှနျမကနျ ပွောတတျတာက ကွိုးကိုငျတတျသူတှေ ကြှမျးကငျြတဲ့ အရာပါ။ ပွဿနာတဈခု ဖွဈလာရငျ သငျ့ကွောငျ့သာ ဖွဈကွောငျး၊ သငျက ဟနျဆောငျကောငျးကွောငျး လှညျ့စားပွောတတျကွပါတယျ။
8. ဟနျဆောငျ ကောငျးတယျ။
ပွဿနာဖွဈရငျ မဆှေးနှေးခငျြဘဲ ရှောငျထှကျတတျ ပါတယျ။ သူ့အပွဈအတှကျ တာဝနျယူမှု မရှိသလို သငျ့ကို ဒုက်ခရောကျအောငျ လုပျဖို့လညျး ဝနျမလေးပါဘူး။ သငျပွောသမြှ စကားတှကေ အမှားတှေ ဖွဈတယျလို့ ယူဆလာအောငျ ဟနျဆောငျကောငျးတတျ ကွပါတယျ။
9. မာယာတှေ သုံးတတျတယျ။
ကွိုးကိုငျတတျ သူတှကေ သငျ့ဆီက တဈခုခုလိုခငျြရငျ မာယာတှေ သုံးတတျပါတယျ။ သူတို့မှာ အလှနျ ခကျခဲနကွေောငျး ပွောပွီး သူ့ဘကျပါလာအောငျ ဆှဲဆောငျမှာပါ။ မာယာတှသေုံး၊ ခြိုခြိုသာသာလိမျညာပွီး အကူအညီ တောငျးလာရငျ လုံးဝ မကူညီသငျ့ပါဘူး။
10. ဘာမှ မမှတျတော့သလို ဟနျဆောငျတတျတယျ။
သူတို့ဟာ တဈကိုယျကောငျး ဆနျသူတှဖွေဈလို့ သကျသာမယျ့ လမျးကိုပဲ ရှေးမှာပါ။ ပွဿနာကို မရှငျးခငျြတော့ရငျ မမှတျမိတော့ဘူး၊ စဉျးစားလို့ မရတော့ဘူး ဆိုပွီး လှယျလှယျနဲ့ ပွောထှကျတတျ ပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သငျ့အမွဲ စိတျညဈနရေ မှာပါ။ သငျနဲ့ လမျးခှဲခငျြလို့၊ တကယျ မခဈြလို့ ဒီလို လှညျ့စားနတောပါ။ ကွိုးကိုငျတတျသူနဲ့ လမျးခှဲပွီး အေးအေးဆေးဆေးနတော ပိုကောငျးပါတယျ။
သင့်ချစ်သူက သင့်ကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နေကြောင်း သိနိုင်မယ့် အချက် (၁၀) ချက်
လူတွေဟာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်လာကြပြီ ဆိုရင် ဂရုစိုက်တာတွေ၊ ဖေးမတာတွေ၊ နားလည်မှု ပေးတာတွေကို လိုချင်တာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သင်ကို့ ရုပ်သေးရုပ် တစ်ရုပ်လို ကြိုးကိုင် ခြယ်လှယ်နေရင်တော့ လမ်းခွဲလိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
1. သင်ဟာ အမြဲတမ်း အပြစ် ရှိတယ်။
ကြိုးကိုင်တတ် သူတွေရဲ့ အရည်အချင်းက သင့်မှ အပြစ် မရှိရင်တောင် အပြစ်ရှိသလို ခံစားရအောင် ပြုလုပ်တတ် တာပါပဲ။ သင်က အကူအညီ တောင်းစရာရှိလို့ ဖုန်းဆက်ရင်တောင် အလုပ်များနေတာ မသိဘူးလား၊ ဘာလို့ ဒီအကြောင်းတွေ လာပြောနေရတာလဲ ဆိုပြီး ပြောပါလိမ့်မယ်။ အကူအညီတောင်းမိတဲ့သူက မှားတယ်လို့ ခံစားသွား ရအောင် ပြောတတ်ကြပါတယ်။ သင့်ချစ်သူက သင့်ကို ကြိုးကိုငွနေရင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲ ဆိုတာကို Barrie Davenpere က အကြံပေးထား ပါတယ်။
- သူက သင့်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ဆိုတာ လက်ခံပါ။
- စိတ်ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ထားပါ။
- သူတို့ရဲ့ အပြုအမူ အတွက် တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်ပါ။
2. သူတို့ဟာ အမြဲနစ်နာသူတွေ ဖြစ်နေတတ်ကြတယ်။
ကြိုးကိုင်တတ်သူတွေက သူတို့ဘဝဟာ သနားစရာကောင်းကြောင်း၊ ကံဆိုးကြောင်း၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ ပြည့်နေကြောင်း သနားစရာကောင်းအောင် ပြောတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ဟာ ခေါင်းရှောင် တတ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲတမ်း စိတ်ညစ်စရာတွေ ကိုပဲ ကြားနေရ မှာပါ။ သူတို့ရဲ့ အကျိုးအတွက် ပြောပြနေတာ ဖြစ်လို့ ပြိုင်မငြင်းဘဲ အေးအေးဆေးဆေး နားထောင်ပေးလိုက်ပါ။
3. ရန်စ တတ်တယ်။
ကြိုးကိုင်တတ် သူတွေဟာ အရင် ရန်စတတ် ကြပါတယ်။ သင့်ကို ဒေါသ ထွက်လာအောင်၊ စိတ်ဆိုးလာအောင် တဖြည်းဖြည်း ရန်စတတ်ပါတယ်။ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ သင်က လွန်ကြောင်း အများမြင်အောင်လုပ်ပြီး သူ့အပြစ်ကိုတော့ ဖုံးကွယ်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ရဖို့ အချိန်နည်းလာလေလေ၊ စဉ်းစားဖို့ အချိန်နည်းလာလေလေ ပါပဲ။ ကြိုးကိုင်တတ်သူတွေက သင့်ကို စဉ်းစားရကြပ်အောင် လုပ်တတ် ပါတယ်။ သင်ဟာ မစဉ်းစားတတ် တော့ဘဲ အမှားတွေပဲ လုပ်မိအောင် တမင်ချောက်တွန်း ပေးနေတာပါ။
5. သင့်ပြဿနာတွေကို မကြားချင်ယောင် ဆောင်နေတတ်တယ်။
ကြိုးကိုင်တတ် သူတွေရဲ့အရည်အချင်းက ဂရုမစိုက်တတ်ခြင်း ပါပဲ။ သင့်ပြဿနာတွေကို ပြောတဲ့အခါ သူက စကားဖြတ်ပြောပြီး အလုပ်များချင်ယောင် ဆောင်နေတတ်ကြ ပါတယ်။ သူ့ပြဿနာတွေက သင့်ပြဿနာတွေထက် ကြီးကြောင်း သနားစရာကောင်းအောင် ပြောတတ်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီလို ခေါင်းရှောင်တတ်သူကို လမ်းခွဲပြီး ကိုယ့်အပေါ် တကယ် မေတ္တာထားသူကိုပဲ ရှာသင့်ပါတယ်။
6. သင်မရှိရင် သူသေသွားလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့စကားကို ခဏခဏ ပြောတတ်တယ်။
အဲဒီလိုစကားက သင့်စိတ်ကို လှည့်စားလိုက်တာပါ။ "နင်မရှိတော့ ငါသေလိုက်မှာနော်" လို့လည်း ပြောလည်း မယုံလိုက်ပါနဲ့။ သူတစ်ခုခု ဖြစ်သွားရင် သင့်ပယောဂ မကင်းသယောင် ဖြစ်အောင် လုပ်တာပါ။ သူပြောတဲ့အတိုင်း တကယ် မသေနိုင်လို့ ရဲရဲသာ လမ်းခွဲလိုက်ပါ။
7. အပြစ်ကို လွှဲချတတ်တယ်။
လိုရာကို ဆွဲပြီး မမှန်မကန် ပြောတတ်တာက ကြိုးကိုင်တတ်သူတွေ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အရာပါ။ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာရင် သင့်ကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်က ဟန်ဆောင်ကောင်းကြောင်း လှည့်စားပြောတတ်ကြပါတယ်။
8. ဟန်ဆောင် ကောင်းတယ်။
ပြဿနာဖြစ်ရင် မဆွေးနွေးချင်ဘဲ ရှောင်ထွက်တတ် ပါတယ်။ သူ့အပြစ်အတွက် တာဝန်ယူမှု မရှိသလို သင့်ကို ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်ဖို့လည်း ဝန်မလေးပါဘူး။ သင်ပြောသမျှ စကားတွေက အမှားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆလာအောင် ဟန်ဆောင်ကောင်းတတ် ကြပါတယ်။
9. မာယာတွေ သုံးတတ်တယ်။
ကြိုးကိုင်တတ် သူတွေက သင့်ဆီက တစ်ခုခုလိုချင်ရင် မာယာတွေ သုံးတတ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ အလွန် ခက်ခဲနေကြောင်း ပြောပြီး သူ့ဘက်ပါလာအောင် ဆွဲဆောင်မှာပါ။ မာယာတွေသုံး၊ ချိုချိုသာသာလိမ်ညာပြီး အကူအညီ တောင်းလာရင် လုံးဝ မကူညီသင့်ပါဘူး။
10. ဘာမှ မမှတ်တော့သလို ဟန်ဆောင်တတ်တယ်။
သူတို့ဟာ တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်သူတွေဖြစ်လို့ သက်သာမယ့် လမ်းကိုပဲ ရွေးမှာပါ။ ပြဿနာကို မရှင်းချင်တော့ရင် မမှတ်မိတော့ဘူး၊ စဉ်းစားလို့ မရတော့ဘူး ဆိုပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ ပြောထွက်တတ် ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သင့်အမြဲ စိတ်ညစ်နေရ မှာပါ။ သင်နဲ့ လမ်းခွဲချင်လို့၊ တကယ် မချစ်လို့ ဒီလို လှည့်စားနေတာပါ။ ကြိုးကိုင်တတ်သူနဲ့ လမ်းခွဲပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေတာ ပိုကောင်းပါတယ်။